Algorithmic Trading N'ihi na Beginners axMaximum PROFIT! - Mụọ ahia 2 Machị 2021
Mụọ 2 Ahịa 2021 Ntuziaka Na Trading algorithmic!
Algọridim trading - ma ọ bụ nanị 'algo trading', bụ usoro nke ikwe ka a tupu-kọmputa kọmputa nnyocha na ahia na n'ihi gị. Echiche zuru oke bụ na algorithm na-akpata nwere ikike ịhazi data ahịa na oke ọsọ ọsọ karịa gị ma ọ bụ m.
N'ihi ya, mmemme azụmaahịa algorithmic na-achọsi ike nke ndị na-etinye ego na ụdị dị iche iche.
Site na nke ahụ, algorithm nke na-akwado sọftụwia azụmaahịa dị mma dị ka onye wuru ya. Yabụ, ọ bụrụ na e mepụtara sọftụwia ahụ nke ọma, ọ ga-abụ na ọ ga-efunahụ gị ego.
Fancy achọta otú algo trading n'ezie na-arụ ọrụ? Ọ bụrụ otu a, gbaa mbọ gụọ anyị Mụta 2 Trade 2021 Ntuziaka Na Trading Algorithmic.
Rịba ama: Ọ bụrụ n’ịnweghị ahụ iru ala ịhapụ mmemme ka itinye ahịa na nnọchite gị, ọ nwere ike ịba uru ịtụle ọrụ mgbama. Nke a bụ ebe algorithm akpaaka na-atụ aro ahịa ndị dabere na ọnọdụ ahịa - nke ị ga-eji aka gị rụọ ọrụ.
Na ụdị kachasị ya, azụmaahịa algorithmic bụ atụmatụ azụmaahịa akpaghị aka nke dabere na kọmputa. Karịsịa, teknụzụ dị n'okpuru ga-enyocha ọtụtụ puku ahịa n'oge ọ bụla, na-achọ mgbe niile ohere ịzụ ahịa. Mgbe ngwanro ahụ kwenyere na ahia dị mma na-eme, ọ ga-etinyezi iwu ahịa dị iche iche n'ụzọ kwụ ọtọ. Dịka, ị na-eguzo ịkpata ego na-enweghị mkpa ibuli otu mkpịsị aka.
Site na nke a, akụkụ siri ike na-emepụta ma wuo mmemme azụmaahịa algorithmic nke nwere ikike ị gafere ahịa ahụ. A sị ka e kwuwe, sọftụwia ahụ enweghị ikike 'iche' kwa-okwu, ebe a na-agwa ya naanị ịgbaso usoro akọwapụtara tupu oge eruo. Nke a bụ otu ihe omume mmemme ọ bụla nke dabere na algorithms ma ọ bụ teknụzụ mmụta igwe.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na e mepụtara ngwanrọ algorithmic trading iji zụta otu ụzọ isi ego mgbe ọnụahịa ya gbadara karịa 5% na oge 12-hour. Nke abụọ na ọnọdụ a akọwapụtara tupu oge eruo, algo trading bot ga-aga n'ihu itinye ntinye ntinye - yana ụfọdụ iwu nkwụsị na-aba uru na-erite uru. Nke a bụ naanị ezigbo ihe atụ, ebe ikike ịre ahịa sọftụwia na-akwado algorithm bụ enweghị oke.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị naanị na ngwanrọ ahụ ga-enwe ike inyocha ọtụtụ puku akụrụngwa ego na 24/7 ndabere, mana ọ nwere ike ịme ya na-enweghị ahụ ike ọgwụgwụ, enweghị isi, ma ọ bụ mmetụta mmadụ. Ọzọkwa, enweghị njedebe na ọnụ ọgụgụ nke trading azum na enwere ike ịkụziri algorithmic bot ịgbaso. Nke a nwere ike ịgụnye atụmatụ dị iche iche na ịzụ ahịa azụmaahịa, pụtara ịzụ ahịa azụ ahịa, ịzụ ahịa azụmaahịa, yana ịtụ ahịa ịchụ.
Uru na ọghọm nke algorithmic Trading
Algọridim nwere ike hazie data kariri ahia mmadu
Ihe ndị dị na ngwanrọ na-enyocha ọtụtụ puku ahịa n'oge ọ bụla
Ahịa 100% na-enweghị aha
Ebe iwu na àmụmà ọsọ
Arụ ọrụ 24/7 enweghị ike ọgwụgwụ ma ọ bụ enweghị uche
Enweghị ike ịgba ọnụọgụ azụmaahịa azụmaahịa nke teknụzụ nwere ike iji rụọ ọrụ
Ga-efunahụ ego ma ọ bụrụ na algọridim na e mere emezighituri
Fọdụ ndị na-eweta azụmaahịa algorithmic na ntanetị n'ịntanetị bụ aghụghọ
Kedụ ka Algorithmic Trading Si Arụ Ọrụ?
Iji ghọta otú algorithmic trading si arụ ọrụ n'ezie, anyị kwesịrị kewaa abụọ okwu - 'algorithmic' na 'trading'. N'ime nke a, anyị nwere ike ịkọwa ntọala nke otu esi achịkwa sọftụwia ahụ.
Dị ka aha ya na-egosi, algorithmic trading na-akwado site na algorithm. Maka ndị na-amaghị, algọridim dị na usoro ndụ ọ bụla na ntanetị n'ịntanetị. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-agagharị na Amazon ma hụ na weebụsaịtị ahụ na-atụ aro ngwaahịa na ọrụ ị nwere mmasị na ya, nke a dabere na algorithm nke na-elele data akụkọ ihe mere eme.
Nke a nwere ike ịbụ nyocha ndị gara aga ma ọ bụ ịzụrụ ihe ị mere na saịtị ahụ, maọbụ ogologo oge ị nọrọ na ibe ngwaahịa. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụ ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe ndabara na ihe ndị ị tụrụ aro ị na-ahụ kwekọrọ na ọchịchọ na mkpa onwe gị.
Yabụ kedu ka nke a si emetụta azụmaahịa algorithmic? Ọfọn, kama inyocha ihe ị chọrọ ịzụ, teknụzụ na-akpata ya ga-enyocha ọnụọgụ akụkọ ihe mere eme na ahịa ego. Na mgbe anyị kwuru 'nyocha'. anyị pụtara nyocha dị elu na ọnọdụ ọnụahịa akụkọ ihe mere eme, yana etu usoro ndị a siri metụta ọrụ ahịa ugbu a.
N'ihu nke a bụ usoro dị ka mpịakọta ahịa, ọkwa volatility, mmiri mmiri, na mmetụta ahịa. Teknụzụ na-esote site na plethora nke ngwa ngwa ọgụgụ eserese dị elu - dịka RSI (Relative Strength Index), MACD (Mover Convergence Divergence), na Bollinger Bands.
Akụkụ nke abụọ nke ihe a na - ahụ maka ‘azụmaahịa’. Nke ahụ bụ ịsị, ozugbo sọftụwia azụmaahịa algorithmic gosipụtara akara ntinye dị na akụ ọ na-enyocha, sistemụ ahụ ga-aga n'ihu ime ya. N'ihe banyere onye na-ere ahịa mmadụ, nke a ga-achọ usoro iji ogologo ma wepụta echiche iji chọpụta ụdị ntinye na mbata ị ga-ebute.
Dịka ọmụmaatụ, onye na-ere ahia ga-enyocha ego kachasị mma iji mezuo iwu ahụ, yana isi mmalite iji nye iwu nkwụsị na-aba uru.
N'aka ozo, algorithmic trading software nwere ikike ichoputa ihe ntinye di nkpa ma puta n'ime milliseconds. Nke a bụ n'ihi na ihe niile dabere na data akụkọ ihe mere eme, yana otu data a si emetụta ọrụ ahịa ugbu a.
Ihe nke a pụtara nye gị dị ka onye na-etinye ego na ya bụ na a gosipụtara algo trading protocol na-eme gị ego n'ụzọ kwụụrụ onwe ya. Dị ka ndị dị otú a, ị na-enwe ohere ị nweta uru ogologo oge na-enweghị mkpa ịnweta ahụmịhe banyere etu ahịa azụmaahịa si arụ ọrụ.
Gịnị-Ọ bụrụ na ndapụta
Ọ bụrụ na i jirila Microsoft Excel rụọ ọrụ na mbụ, mgbe ahụ ị nwere ike ịghọtarịrị otu esi eme ma ọ bụrụ na ọnọdụ arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ịmee, nke a dị mma - ebe nke a nọ na isi etu esi arụ ọrụ algorithmic trading nyiwe.
Maka ndị na-amaghị, ihe-ma ọ bụrụ na ọrụ ahụ chọrọ 'ime ihe' ihe mgbe ezubere ọnọdụ akọwapụtara tupu oge eruo. N'ihe atụ nke ụwa, ka anyị kwuo na ị na-a brandụ otu ụdị mmiri karama kwa ụbọchị. Ozugbo ị rutere karama ikpeazụ gị, ị ga-aga ụgbọala gaa n'ụlọ ahịa kacha nso gị ma zụta igbe abụọ ọzọ.
'Kedu' akụkụ nke akụkụ ahụ ị na-aga ịzụta mmiri mmiri mmiri - nke ị na-eme mgbe 'ọ bụrụ' akụkụ nke akụkụ ahụ ka ịmalite. N'ihe atụ a, 'ọ bụrụ' metụtara ebuka gị nke mmiri mmiri na-agbada naanị otu.
N'ihe banyere ahia algorithmic, 'ihe' na-ezo aka n'itinye ahia. A na-eme nke a na-akpaghị aka mgbe 'ọ bụrụ' na-akpata, nke nwere ike ịbụ ihe ntanetị na-egosi na ọ nwere ohere ịzụ ahịa.
Iji hụ na ị ghọtara otu ọrụ ọ ga - esi rụọ ọrụ mgbe ị na - azụ ahịa site na usoro algorithm dị na mbụ, lelee ihe atụ dị n'okpuru.
Emere sọftụwia ahia algo iji nyochaa ebuka edeputara NYSE
Otu n'ime ọnọdụ ya tupu emee ya bụ ịtụle RSI, nke ọ na-eme 24 awa kwa ụbọchị
Akụkụ 'ọ bụrụ' nke algorithm bụ RSI nke 71
'Kedu' akụkụ nke algọridim ahụ bụ itinye 'ire' ahịa
Akụkụ nke ọrụ 'kedu' dabara adaba na ntinye ọpụpụ
Dịka ị pụrụ ịhụ site n'elu, ọrụ ihe-ma ọ bụrụ na-enye onye na-etinye ego ohere ịnweta ego na-acha anụnụ anụnụ mgbe RSI gafere 70. Dịka nke a na-egosi na akụnụba ahụ karịrị, iwu 'ree' bụ nhọrọ ezi uche dị na ya.
Uru nke Algọridim Trading
Ma ekwenyeghi banyere ikike nke algorithmic trading? N’okpuru, ị ga - ahụ ụfọdụ isi ihe kpatara eji etinye algorithmics na-aga n’ihu karịa ndị ahịa mmadụ.
✔️ Unlimited Research Ga-ekwe omume
Uru mbụ na-abata n'uche mgbe ị dabere na usoro azụmahịa algo bụ ikike ya ịme nyocha na-enweghị njedebe. Dika anyi na-achota na anyi Muta nduzi ahia abuo, ndi nwere ego gha enweta ego ha ghari ebe enwere otutu akwukwo.
Dịka ọmụmaatụ, site na ilekwasị anya naanị gold na silver, nke a na-enye gị ohere inweta nka na igwe ọla edo siri ike. N’ụzọ dị oke mkpa, anyị na-atụ aro ịpụ ala dịka ọ gafere ebe enwere ike ịchọpụta klaasị akụ na ụba ọ bụla na ebe a na-etinye ego. Ọ bụrụ na ị nwaa nke a, ị ga-abụ Jack nke ọrụ niile na ọ nweghị nke ọ bụla.
Site na nke a, algorithmic trading software anaghị ejikọta otu njedebe dị ka onye na-etinye ego na mmadụ. N'aka nke ozo, o nwere ike inyocha otutu puku ahia di iche-iche n'oge obula - n'enweghi egwu nke 'ichikota ozi'.
✔️ Ahịa 24 Ahịa Kwa .bọchị
Ọbụghị naanị na ndị ahịa mmadụ na-etinye ụfọdụ oge nyocha kwa ụbọchị, mana nke a bụkwa ikpe mgbe ị na-etinye iwu. Iji maa atụ, ka anyị were oge elekere asatọ maka ụbọchị azụmaahịa oge niile. Onye ahụ nwere ike iji ọtụtụ awa na-enyocha ahịa, ma ụbọchị fọdụrụ na-eme ihe ndị a.
N'otu aka, ọ bụ eziokwu na ndị ahịa nwere ọkaibe mara ama na ha na-eji aka ha azụ ma na-ere ihe onwunwe. N'aka nke ọzọ, cheedị ihe onye ahịa nwere oge ga-eme ma ọ bụrụ na ha nwere ike nyocha na ahia 24 awa kwa ụbọchị - ụbọchị 7 kwa izu?
O doro anya na nke a abụghị ihe ga - ekwe omume maka ụbụrụ mmadụ - mana ọ bụghị usoro mmemme algorithmic nke ọma. Dịka, site na iji algo trading bot nke na-arụ ọrụ maka mkpa itinye ego nke onwe gị, ị nwere ike ịzụ ahịa 24/7 n'ụzọ dị irè.
✔️Zere enweghị isi na mmetụta mmadụ
Otu n’ime ihe mgbochi kasịnụ chere ndị ahịa mmadụ ihu bụ nke mmetụta uche. Ọbụna ndị ahịa nwere oge na-ekwe ka mmetụta uche na-akawanye ha site n'oge ruo n'oge, nke a nwere ike bụrụ ọdachi. Ka anyị were ọrịa coronavirus dị ka ihe atụ kachasị.
Ọ dịghị onye nwere ike ibu amụma na ụdị S & P 500 ga-awụfu nso-na 30% na ohere nke 1-2 izu. N'aka nke ya, ndị nwere ọkwá dị elu nwere ike ịnwa ọnwụnwa ịhapụ ihe ha na-eme mgbe ọ bụla ha na-azụ ahịa, ma kama itinye ego na-enweghị isi iji gbalịa 'nweta ego ahụ'.
N'ụzọ dị oke mkpa, bot bot algorithms trading bụ naanị otu ngwanrọ ngwanrọ nke akwadoro ịgbaso ọnọdụ 'ọ bụrụ na'. Dịka, ọ naghị echebara mmetụta uche ma ọ bụ enweghị isi.
Ezigbo maka Newbie Trader
Uru ọzọ nke algorithmic trading bụ na ọ na-enye gị ohere itinye aka na ụlọ ọrụ ntinye ego zuru ụwa ọnụ na-enweghị oke ihe ọmụma ma ọ bụ ahụmịhe. Dị ka ọ dị, ọ ga-adị mkpa ka ị gafee usoro nyocha dị ogologo ma na-agwụ ike nke ga-ewe ọtụtụ ọnwa ọtụtụ.
Ihe bu ụzọ na nke a bụ ịmụ otu esi agụ ma ghọta eserese, ọnọdụ ọnụahịa, na ihe ngosipụta teknụzụ. Agbanyeghị, ọ nweghị nke achọrọ mgbe ị na-ekwe ka onye ahịa algo rụọ ọrụ na nnọchite gị, dịka teknụzụ na-arụ ọrụ n'ụzọ kwụ ọtọ. Nke a pụtara na ị nwere ike ịnọdụ ala ma kwe ka bot na-azụ ma na-ere akụ na-enweghị mkpa ibuli mkpịsị aka.
Usoro Algorithmic Trading
Yabụ ugbu a ị nwere nghọta maka otu sọftụwia sọftụwia azụmaahịa si arụ ọrụ, ugbu a, anyị kwesịrị ịkọwa ụfọdụ atụmatụ nke akwadoro usoro ahụ iji mezuo.
Agbanyeghị na ọnụọgụ ọnụọgụ enweghị ike ịgbazite, n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ụfọdụ ihe atụ ndị a na-ejikarị.
Oge ịzụ ahịa bụ usoro a ma ama nke ndị ahịa nwere oge ji eme ihe, yabụ, dị ka ọ dị, ọ bụ ihe ezi uche dị na usoro algo na-ejikwa ya. Maka ndị na-amaghị, ịzụ ahịa ọkụ bụ usoro nke 'ịwụli otu ihe' ruo mgbe ọnọdụ a na-adịkwaghị egwu.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ebuka Apple anọla na trajectory maka izu anọ kwụ ọtọ, na-enweghị ihe doro anya kpatara iji kwenye na omume a ga-akwụsị n'oge ọ bụla. N'iburu nke a n'uche, usoro nkwekọrịta algorithmic ga-achọ ịbanye n'ọnọdụ mgbe mgbazi ahịa pụtara.
Mgbanwe ahịa n'oge ahịa ehi na-abụkarị ndị na-etinye ego na-etinye ego na uru ha - nke na-ebute obere mmegharị na ntụgharị ihu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na enweghị ihe kpatara ị ga - eji kwenye na ike ahụ ga - ebelata, usoro azụmaahịa algorithmic ga - ele anya 'zụta itinye'.
N'otu aka ahụ, nke a bụkwa ikpe ma ọ bụrụ na akụ dị na ahịa anụ ọhịa bea, agbanyeghị, bot ahụ ga-etinye ahịa n'ahịa mgbe akụ na-agbazi na ụzọ elu.
Zụ ahịa ikpe azụ bụ atụmatụ dị oke mma nke na-eme ka uru baa uru n'agbanyeghị ụzọ ahịa si aga. Echiche dị oke mkpa bụ irite uru site na akụ na-enweghị mmasị na ọnụ ahịa abụọ ma ọ bụ karịa.
Iji maa atụ, ka anyị kwuo:
Ọnụ 'Buy' nke ebuka Nike na Exchange 1 bụ $ 85.00
Ọnụ 'ere' ahịa Nike na Exchange 2 bụ $ 85.20
N'okwu Layman, nke a pụtara na ị nwere ike itinye iwu ịzụta na ebuka Nike na $ 85.00, wee zụọ ahịa na $ 85.20. Dị ka ndị dị otú a, n'agbanyeghị otu ụzọ ahịa si agagharị, ị na-eme obere-obere, ma uru e kwere nkwa nke 0.24%.
Enwere isi ihe dị mkpa iji rịba ama banyere azụmaahịa arbitrage.
Nke mbu, mgbe ohere dapụtara - ha anaghị eme ihe kariri obere sekọnd. Nke a pere oke mpe maka oge azụmaahịa mmadụ nwere iji tinye ahịa achọrọ.
N'ezie, ị nwere ike idafu ego ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta otu n'ime ahịa abụọ enwetara na ọnụego achọrọ. N'aka nke ọzọ, sọftụwia ịzụ ahịa algorithmic nwere ike itinye iwu ịzụta na ire dị mkpa n'ihe gbasara milliseconds.
Nke abuo, a ga - enwerịrị ego mmiri dị - na isi ihe ntinye achọrọ, na usoro ịzụta na Exchange 1, yana ire ere na Exchange 2. Ọ bụghị naanị na nke a pụtara na onye ahịa mmadụ kwesịrị ịgbakọ etu esi ọtụtụ ha nwere ike itinye ahịa ọ bụla iji bulie uru ha, mana ọzọ, ha ga-eme nke a na ọsọ ọsọ.
Ka ọ na-erule oge onye ahịa mmadụ nwere ike ime nke a, ụfọdụ, ma ọ bụ ihe niile, nke mmiri mmiri ahụ ga-erirịrị. Na nke ahụ, algorithmic trading bot ga-enwe ike iru ihe dị n'elu na milliseconds.
🥇️ Ntughari Ntughari Ntughari
Usoro ahia ozo nke algorithmic software nwere ike idunye na nfe bu nke ntughari. Ebe ndị a dị na tiori ahụ na akụnụba n'oge ụfọdụ ga-alaghachi na nkezi ọnụahịa akụkọ ihe mere eme ya.
Karịsịa, ọ bụ ezie na akụ nwere ike isi na ọnụọgụ akụkọ ihe mere eme ya gbanwee, na ndekọ ọnụ ọgụgụ - nnukwu mmebi elu ma ọ bụ ala kwesịrị ịlaghachi ihe ọ pụtara. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na e kenyere algorithmic bot ịzụ ahịa Dow Jones. Iji mee ka ihe dị mfe, anyị ga-ekwu na akụkọ ihe mere eme, Dow na-azụ ahịa n'ime 5% nke ụbọchị 200 na-agagharị.
Ọ bụrụ na Doe Jones banyere ahịa bea dị mkpụmkpụ - emesịa ọ na-efunahụ 20% n'ime ọnwa abụọ, usoro azụmaahịa algorithmic nwere ike kpebie itinye iwu ịzụta. Ọ ga-eme nke a n'ihi na ọnụ ọgụgụ, ikekwe bụ na Dow Jones kwesịrị ịlaghachi na +/- 5% nso nke ụbọchị 200 na-agagharị.
Etu esi achọta onye na enye ahia ahia?
Ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ ntuziaka anyị ruo ugbu a, ị nwere ike ịnọ na-eche na ịzụ ahịa algorithmic bụ ụzọ dị mma iji nye gị uru bara uru. O di nwute na, ọ bụghị dị ka ogologo dị ka nke a. Ihe kpatara nke a bụ na sọftụwia dị n'okpuru bụ naanị ezigbo mmadụ, ma ọ bụ otu ndị, wuru ya.
Iji maa atụ, ọ bụrụ na etinyere algo bot iji kesaa atụmatụ azụmaahịa dị n'okpuru, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ọ ga-eme. Ka emechara, software bụ nanị na ebe na-eso tupu set ọnọdụ na e arụnyere n'ime software. N'iburu nke ahụ n'uche, n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ụfọdụ ndụmọdụ banyere otu esi achọta onye na-eweta ahịa azụmaahịa ziri ezi.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji mee nyocha n'onwe gị, ị ga-ahụ ndị ahịa atọ a na-ahụkarị nke algorithmic na ala nke ibe a.
Ebe ezi uche dị na ya bụ ịme ụfọdụ ọrụ ụlọ na nzere nke ndị na-eweta ahịa algo. Igwe intaneti juputara na nyocha na ọkwa, yabụ na ọ bara uru ịhụ ihe ndị debanyere aha ha gara aga na ndị ugbu a kwuru banyere onye na-eweta ya.
Abia na onu ahia, nkea bu ihe osiri ike inyocha. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-ahọrọ iji $ 100 na onye na-eweta ahịa algo nke na-efunahụ gị ego, ma ọ bụ $ 2,000 na ikpo okwu nke na-eme kwa ọnwa nke 60%? N'ụzọ dị oke mkpa, ọ bụrụ na ịnwere ike ịchọpụta na azịza ndị onye na-eweta ya ziri ezi, ịkwesịrị ịdị njikere ịkwụ ụgwọ dị elu.
✔️ Lọ ngosi
Anyị ga-arụ ụka na ọnụnọ nke ụlọ ọrụ ngosi nwere ike ịbụ metric kachasị mkpa iji chọọ. N'ime ime nke a, ị ga-enwe ohere ịnwale sọftụwia azụmaahịa algorithmic tupu izipu ya n'ime ọhịa. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ bụrụ n'ịchọpụta na bot anaghị arụ otu ịchọrọ, ị nwere ike belata eriri ahụ site n'ịhụ na ọ gaghị azụ ahịa na ego gị siri ike.
✔️ Na-efu Trial
N'elu ụlọ ọrụ ngosi, anyị na-ahọrọ saịtị ndị na-azụ ahịa algo nke na-enye nnwale n'efu nke ụdị ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ikpo okwu na-enye nkwa ịkwụ ụgwọ ụbọchị 30, nke a ga-enye gị ohere ị nweta nkwụghachi na ndenye aha gị.
✔️ Ịdebanye aha ọnwa
Obi abụọ adịghị ya, a dụrụ gị ọdụ ịhọrọ onye na-eweta azụmaahịa algorithmic nke na-arụ ọrụ na ndebanye aha ọnwa. Ihe kpatara nke a bụ na onye na-eweta ọrụ ga-akwali ime ka tweaks dị mkpa na mmelite na-agbanwe agbanwe.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, yabụ ndị na-eweta ya maara na ọ ga-efufu ndị ahịa na-akwụ ụgwọ. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ bụrụ na ị na-eji onye na-eweta ọrụ na-akwụ ụgwọ nnukwu ego, ị ga-etinye aka na limbo ma ọ bụrụ na ọ gbanwee na algo bot dị n'okpuru.
In-House Algo Trading ma ọ bụ Broker Ndakọrịta
Ọ dịkwa mkpa iwepụta oge ụfọdụ iche maka etu esi azụ ahịa gị. E kwuwerị, naanị otu ụzọ esi azụ ahịa akụ n'ịntanetị bụ iji onye na-ere ahịa.
N'echiche a, ị nwere nhọrọ abụọ - onye na-eweta ọrụ nke na-etinye azụmaahịa n'ime ụlọ, ma ọ bụ nke na-enye gị ohere ijikọ bot na akaụntụ azụmaahịa gị.
Platformsfọdụ nyiwe nke algorithmic na-enye ngwugwu niile. Site na nke a, anyị na-ekwu na onye na-eweta ọrụ ahụ ga-ahụ na azụmaahịa akpaghị aka na-etinye akaụntụ akaụntụ ya nke ya. N'ime ime nke a, ị ga -enwe ikike ịnweta oke nke uru gị - obere ọrụ.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-etinye $ 5,000 na onye na-eweta ya na ọkwa ọrụ nke 10%. Ọ bụrụ n ’onwa Mee nke algo sọftụwia na - eme nloghachi nke 45%, nke a bụ uru nke $ 2,250. ozigbo iwepu ọrụ nke $ 225, nke a ga - eme ka ị nweta uru dị mma nke $ 2,025.
Fọdụ ndị ahịa na-ahọrọ inwe ike ịchịkwa ntinye ego nke algo software ha. Dị ka ndị dị otú a, ha na-ahọrọ iji onye na-eweta ọrụ nke na-enye ndakọrịta ahịa. N'okwu Layman, nke a pụtara na algorithmic bot nwere ike jikọta ya na akaụntụ azụmaahịa onwe gị.
N'ọtụtụ ọnọdụ, sọftụwia ahụ ga-adaba na nke ọ bụla MT4 ma ọ bụ MT5, nke pụtara na ị nwere ike iji ya na ọtụtụ narị ndị na-ere ahịa n'ịntanetị. Ọzọkwa, ị ga-enwe ike ịchịkwa usoro itinye ego na ego niile - yabụ ị ga-enweta nnụnụ anya zuru oke maka ihe bot na-eme.
Kachasị mma Algorithmic Trading Providers nke 2021
Ọ bụrụ na ịchọrọ ụda nke ịzụ ahịa algo bot na nnọchite gị 24/7, n'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ndị ọrụ ntanetị atọ anyị kacha elu nke 2021. Dị ka oge niile, gbaa mbọ hụ na ị ga - eme nyocha nke gị tupu ịhapụ ego gị.
1. Uru Uru Mee $ 1,500 Ka $ 4,200 Daily Na The World kasị ọgụgụ isi Trading Software
Teknụzụ ahia ahia anyị na-enyocha crypto na Uru Uru 24/7
Nnukwu ihe eji esere anyị data na-ahụ usoro dị na ahịa
Ihe omuma ahia nke ahia ahia nke ahia ahia bu 'algorithm' nke na eme ka ndi oru anyi nweta $ 2000 kwa ubochi
Mụọ 2 Trade Rating
88% kwuru na Onwe mmeri
$ / £ 250 Min Nkwụnye ego
Nabata Debit na Kaadị E Si Nweta
Gaa na Uru Pro
2. Prime Advantage - Nweta ihe ruru $ 3,000 kwa ụbọchị bido taa
Na Anyị Software Auto Auto Trading
Prime Advantage na-ekwu na algo trading bot nwere ike ịkpụlata uru micro 3 nde nke abụọ nke ngwa ngwa karịa ndị na-ere ahịa. Ndị otu ahụ na-enye nkwado nkwado zuru oke iji hụ na ị nwere uru karịa ahịa n'oge niile.
5 Star Nkwado Ndị Ahịa
100% Na-ụlọ Lọjistik
Tradingzụ ahịa Cryptocurrency naanị - enweghị CFDs ma ọ bụ Forex
Gaa Leta Isi Abamuru
3. CFD Trader - Bụrụ onye na-akwụ ụgwọ ego na azụmaahịa ọnlaịnụ
Onye ahia CFD dabara na nke gị ka na-anwale usoro azụmaahịa algorithmic. Site na ntinye ntinye nke 250 naanị, ikpo okwu na-eji usoro azụmaahịa ụlọ. Nke a pụtara na a ga-egbu ahịa niile maka gị. N’ụzọ dị oke mkpa, ị nwere ike ịdọrọ ego gị n’oge ọ bụla.
Mee ka onye ahia ahia CFD kacha mma nke # 1 kacha mma nke UK
1 n'efu 1on1 ịnye ọzụzọ na-akpọ n'ime awa 48 mbụ nke ntinye aka
Onye nduzi nke ga - enyere gị aka kwa izu
Gaa Leta CFD Trader
4. Soro anyi ma bido inwe ego na Crypto Trader!
The Crypto Trader bụ otu echebere naanị maka ndị na-awụli elu na nzuzu nke Bitcoin na-enye ma jiri nwayọ nwee akụ na ụba na ịme ya. Ndị òtù anyị na-enwe obi ụtọ ịlaghachi na gburugburu ụwa kwa ọnwa mgbe ha na-akpata ego na laptọọpụ ha naanị nkeji ole na ole nke "ọrụ" kwa ụbọchị
Nkwụnye ego kacha nta nke $ 100
N'ime ngwa ahia 2,000
Ngwa mkpanaka dị
Agaghị agọnahụ na sọftụwia algorithmic nwere ike karịa ahịa mmadụ n'ọtụtụ mpaghara. Ma ọ na-enyocha ọtụtụ puku ahịa na 24/7 ndabere, na-ebuga ọtụtụ narị ihe ngosipụta teknụzụ n'oge ọ bụla, ma ọ bụ na-etinye ahịa na-akpaghị aka n'ihe gbasara milliseconds - n'ezie enweghị oke ihe algo bots nwere ike ime.
A sị ka e kwuwe, nkà na ụzụ na-akpata ya bụ nanị ịrụ ọrụ-ma ọ bụrụ na ị ga - arụ ọrụ - yabụ na inwee ike ịme uru oge niile na - enweghị ebuli mkpịsị aka. Agbanyeghị, ịkwesịrị iji oge zuru ezu na-enyocha nzere nke onye na-azụ ahịa azụmaahịa ị họọrọ, ọbụghị n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ juputara na aghụghọ.
Iji nyere gị aka n'ụzọ, anyị tụlerela atọ n'ime ndụmọdụ azụmaahịa algo anyị na-akwadogo-ha niile nwere ndekọ ogologo oge na oghere.
Ekwesịrị m iji sọftụwia ahia algorithmic n'efu?
Eleghị anya ọ bụghị. Nke ahụ bụ ịsị, ị ga-eji ọtụtụ afọ rụọ ụlọ ọrụ algorithmic dị elu nke nwere ike karịa ahịa ego, naanị iji nye ya n'efu?
Kedu ka m ga - esi mara ma onye na - eweta ahia algorithmic dị mma?
Enweghị ịgọnahụ na oghere algorithmic na-ejupụta na ndị na-enye ojoro na-ekwu nkwuwa okwu. Dị ka ndị dị otú a, ịkwesịrị ịme ikpo nyocha tupu ịdebanye aha.
Ego ole ka algorithmic trading software na-efu?
Nke a nwere ike ịdị iche na-adabere na nke onye ọrụ gosipụtara, nsonaazụ azụmaahịa akụkọ ihe mere eme. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-akwụ ụgwọ ọtụtụ ihe maka bot nke na-akwụghachi ụgwọ kwa ọnwa nke 70%, karịa na ị ga-eji obere ihe na-eme naanị 2%.
Kedu ka m ga - esi nweta robot algorithmic iji soro usoro nke onwe m?
I nwere ike ịme nke a ma ọ bụrụ na onye na-eweta ọrụ algorithmic na-enye gị ohere ịnweta koodu isi ngwanrọ ahụ. O yighị ka nke a ọ ga-abụ ikpe, ebe ọ bụ na nke a ga-enye ndị debanyere aha ka ha kere ndị ọzọ koodu ahụ.
Enwere m ike ịnwale algorithmic trading software na-enweghị itinye ego m?
N'ọnọdụ ụfọdụ, ee. N'ezie, anyị na-ahọrọ ndị na-eweta ọrụ na-enye ọrụ ngosi ụlọ, ebe nke a na-enye gị ohere ịnwale-ịkwanye bot tupu ị tinye ego gị.
Kedu klaasị klaasị algorithmic trading sọftụwia zubere?
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụ ọ bụla a pụrụ ichetụ n'echiche! N'ụzọ dị oke mkpa, ọnweghị oke ọnụ ahịa ahịa algorithmic trading bots nwere ike nyochaa.
Kedu ka m ga-esi akwụ ụgwọ maka sọftụwia ahia algorithmic?
Imirikiti ndị na-enye gị ọrụ na-enye gị ohere ịkwụ ụgwọ site na debit / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ obere akpa.